Maraykanka, 01 March 2017
Arbaco 1 March 2017
Faahfaahinta Khudbadda Madaxweyne Trump
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa goor dhowayd soo gaba gabeeyey khudbaddiisii ugu horraysay ee isagoo madaxwyene ah uu u jeediyo Labada Aqalka ee Koongareeska.
Faahfaahin Laga Bixiyey Khudbadda Trump
Trump oo Dalbaday Kordhinta Miisaaniyadda Ciidanka
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku yaboohay in miisaaniyadda gaashaandhigga ee Maraykanka lagu kordhiyo 54 bilyan oo doolar.
Maraykanka oo Balaarinaya Hawgallada Somalia
Saraakil sar-sare oo Maraykank ah ayaa sheegay in Wasaarada difaaca Maraykana ay doonayso inay balaadhisho awoodda military ee dagaalka ay kula jirto kooxda al-Shabaab ee Somalia
Mo Faarax oo Beeniyay Adeegsiga Dawooyinka Kordhiya adkeysiga
Orodyahanka asalkiisu Soomaaliga yahay ee u orda dalka Britain Maxamed Faarax ayaa beeniyay in tababarihiisu siiyay dawooyinka la mamnuucay ee sare u qaada awoodda jirka ciyaaryahannada.
Trump oo Soo Rogaya Amarro Kale
Xoghayaha Waaxda Amaanka Qaranka Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in amarada cusub ee todobaadkaan uu soo rogi doono madaxweynaha Mareykanka ay noqon doonaan kuwo si wanaagsan uga abaabulan amarki hore ee jahwareerka ka dhaliyey garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee dalkaan.
Kulan looga hadlay Amarki Trump oo Ka Dhacay Minneapolis.
Masaajidka Darul-Hijra ee magaalda Minneapolis ayaa waxaa lagu qabtey shaley salaadii jimcaha ka dib kulan ay ka soo qeybgaleen masuuliyiin ka tirsan gobolka iyo waliba dad aan muslim aheyn.
Mattis: Lama Shaqeyn Karno Ruushka
Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta meesha ka saaray wax wada shaqeyn milatari ah oo dhex mara Mareykanka iyo Ruushka, isaga oo sheegay in duruufaha hadda jira aysan ahayn kuwa saxan.
Safiirka Mareykanka ee Kenya oo Booqday Gaarisa
Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Robert F. Godec ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Russia oo Beenisay Xiriirka Ololaha Trump
Ruushka ayaa maanta beeniyey warbixin uu daabacay wargeyska New York Times oo ku saabsan in xubno ka tirsanaa ololaha madaxweyne Donald Trump ay xiriir la lahaayeen sirdoonka Russia, ka hor doorashadii Mareykanka ee November.